အားလုံးအသစ်ကလိင်ဂိမ်းသင်တို့အဘို့အညာဘက်ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမျိုးအစားကနေအခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းရှိသည်။ သင့်ရဲ့အကြင်သူသည်ယခုဤလက်တွေ့ကျကျဝက်ဝံဂိမ်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဂိမ်းများ၊၃ ခုမြောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများ၊လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ဘတ်စကတ်ဘောဂိမ်းများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပြောင်ဂိမ်းများရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျကျေးဇူးပြုပြီးပါစေ!
Homepage လြှို့ဝှကျသင်တို့အဘို့ညစ်ညမ်းဂိမ်းရှိပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားနှင့်အတူဘရောက်ဇာအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားဘို့အားလုံးအသစ်ကဂိမ်း။
အံ့ဖြယ္သစ္သီး ၃ လံုး
အဲဒီမှာဤမျှလောက်များစွာသောအမာခံညစ်ညမ်းဂိမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များထွက်ရှိပါတယ်,ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်မည်သည့်ကစားသမားများအတွက်အရာအားလုံးရှိပါတယ်တဲ့ဆိုက်မြင်ကြပြီ။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်တို့သို့ဖွင့်အဘယျသို့အကြှနျုပျ၏လိင်ဂိမ်းသင့်ရဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျဂိမ်းတွေအများကြီးနှင့်အတူလာမယ့်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဓိကအမျိုးအစားအားလုံးမှဂိမ်းများရှိပြီးသင်တစ်ခါမျှမသိဖူးသောစိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်ကျိကျိတက်နေသောအချို့ရှိသည်။ ဒီစုဆောင်းမှုကိုစုစည်းထားတဲ့အခါလိင်မှုကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်မယ့်စုဆောင်းမှုကိုဖန်တီးချင်တယ်။ သင်လိင်စိတ်ကွဲပြားမှုအပေါ်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါစေသင်သည်သင့်အတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအများစုဟာဖြောင့်ယောက်ျားများအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံကြသည်ပေမယ့်,ငါတို့လိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ဂိမ်းတွေအများကြီးရှိသည်,ငါတို့၏အဘို့များစွာသောညစ်ညမ်းဂိမ်း,နှင့်မင်းသမီးနှင့်စုံတွဲများအတွက်ပင်ဂိမ်းများ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှဂိမ်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ခွင့်ဘာမှအေးစက်သည်မဟုတ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်ရရှေ့၌သင်တို့တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်,သင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်လှူဒါန်းမှုမဆိုကြင်နာမရှိ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်၏ဂိမ်းအားလုံးကိုသင်၏ဘရောက်ဇာတွင်တိုက်ရိုက်ကစားနိုင်ပြီးသူတို့၏အရည်အသွေးသည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်။ ဒီဂိမ္းေတြအားလံုးကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုးအႀကိဳက္ဆံုးနဲ႔ အလိုအပ္ဆံုးအႀကိဳက္ဆံုးေဆာ့ဖ္၀ဲေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,သင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။, ဒါကြောင့်ငါ့လိင်ဂိမ်းမှကြွလာသောအခါအကြောင်းပြောဆိုရန်ဤမျှလောက်ပိုပြီးရှိပါတယ်,နှင့်အောက်ပါအပိုဒ်များတွင်ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ဒါအံ့သြဖွယ်အောင်သမျှသောအင်္ဂါရပ်များကိုဖုံးလွှမ်းသွားမယ့်.
အကြှနျုပျတို့သညျရှိစေခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့သည်စိတ်ကူးယဉ်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံစုဆောင်းမှုကိုဆက်ကပ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါ,ကျနော်တို့တကယ်ကဆိုလို။ ကျနော်တို့ဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ရပြီကျနော်တို့ကစားသမားလိုအပ်အတိအကျဘာကိုငါသိ၏။ ကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျ၏လိင်ဂိမ်းစုဆောင်းခြင်းဖန်တီးသောအခါ,ငါတို့ထွက်အဲဒီမှာအားလုံးကြီးတွေညစ်ညမ်းလိင်ပြွန်ပြီးနောက်ပုံစံပြု။ သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်းပြွန်ပေါ်တွင်ရှာတွေ့သမျှသောလူကြိုက်များအမျိုးအစားများအပြင်,သင်သည်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားအချက်အချာများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးအစားများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အလိုချင်ဆုံးဂိမ်းအချို့သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ဆယ်ကျော်သက်ငယ်များနှင့်ရည်းစားအတွေ့အကြုံဂိမ်းများပါ ၀ င်သူများဖြစ်သည်။, သို့သော်ငါတို့သည်လည်းသင်သည်သင်၏လိင်စိတ်ထပုလင်းရိုင်းဆုံးလိင်အကြံအစည်တိုက်ဖျက်မည်နိုင်သည့်အတွက်ညစ်ပတ်အမာခံဂိမ်းမှကောင်းသောခံစားရစေလိမ့်မည်ဟုကာမဂုဏ်ဂိမ်းကနေအရာအားလုံးရှိသည်။
သငျသညျလိင်တူချစ်သူဆိုရင်နေပါစေ,လိင်ကွဲသို့မဟုတ်ပဲစွယ်စုံကျမ်း,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာအမာခံလိင်တူချစ်သူဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းသင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်လျှက်ရှိကြောင်းသင်စောင့်ရှောက်မည်ကြောင်းတစ်သားတည်းလိင်တူချစ်သူဂိမ်းဤမျှလောက်များစွာသောနာရီနှင့်တကွကြွလာ။ နည်းနည်းပါးပါးနဲ့ကလေးတွေအပေါ်ကြီးကြီးမားမားပိုးပန်းတာမျိုးဆိုရင်ရှော့ပင်းမောဂိမ်းတွေကသင်ရှာနေတာမျိုးပါပဲ။ မင်းသမီးတွေအတွက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေဟာအပြန်အလှန်အရေးယူမှုတွေအများကြီးပါဝင်နေပြီးမီးခိုးရောင်အရိပ်(၅၀)မှာတစ်ခုလိုတောင်တချို့သောစွန့်စားခန်းတွေဆိုရင်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာသာပေးသူတွေလိုချင်တာကိုရဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။
ထွက်ရှိအားလုံးအခြားအချက်အချာထက်ငါ၏အလိင်ဂိမ်းများကိုပိုကောင်းအောင်အရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအားလုံးကိုသင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ဖို့တည်ဆောက်သို့မဟုတ်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင့်ကိရိယာကိုအဓိကဘရောက်ဇာ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းပြေးနိုင်သကဲ့သို့,ထိုကဲ့သို့သောမီးစုန်းကြူး,ဆာဖာရီသို့မဟုတ်အော်ပရာအဖြစ်,သင်တို့သည်နောက်ပြဿနာများနှင့်အတူအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအတွက်တိုင်းတစ်ခုတည်းဂိမ်းစစ်ဆေးပါတယ်။ သူတို့အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ်အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ပြေးလျှင်နေပါစေမိုဘိုင်းဖုန်းများသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များပေါ်တွင်လွန်ကဲစွာပြေးပါ။, သို႔ေသာ္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အိုင္တီဂိမ္းမ်ားကိုထည့္သြင္းကစားရန္အႀကံျပဳပါသည္။၎တို႔သည္သင့္ေလ်ာ္ေသာမ်က္ႏွာျပင္တြင္ခံစားသင့္သည့္အေကာင္းဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပျစ်သီးကိုညစ်ညမ်းဂိမ်းအကြောင်းကိုအထူးင့်အဘယျသို့သငျသညျမိုဘိုင်းပေါ်တွင်သူတို့ကိုကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဂိမ်းညစ်ညမ်းဆိုဒ်များသွားရောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်,သင်သည်သူတို့အိုင်ပီကိရိယာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်တော့မှနှင့်အန်းဒရွိုက်ဂိမ်းကစားရွားလှကြောင်းငါသိ၏။ ဒါကကျွန်မရဲ့လိင်ဂိမ်းများ၏အမှု၌မမှန်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်ငါ၏အလိင်ဂိမ်းမှကြွလာသောအခါ,ငါတို့အသွားအလာနှင့်ပတ်သက်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်မှာသူတို့ရဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေရှိသည်ဖို့ကြီးမားတဲ့နှစ်ကောင်ပေးဆောင်နေသောကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့အပေးအယူဒဏ်ခတ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးရှိတဲ့အသွားအလာတွေရှိလို့ပါ။ အရည်အသွေးအသွားအလာဘာကိုဆိုလိုသလဲ? ကောင်းပြီ,ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းနေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ အကြှနျုပျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ဆိုက်ကိုစွန့်ခွာချင်အောင်နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေမရှိကြပါဘူး။ ငါတို့သည်လည်းခြိုးခြံခြိုးခြံခြွေနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒေတာစုဆောင်းကြပါဘူး။, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာဆိုရင်ပြီးတာနဲ့သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်များအတွက်အခြားဂိမ်းကစားအချက်အချာလိုအပ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့ရှိသမျှသည်အပတ်တိုင်းအသစ်ဂိမ်းတွေနဲ့လာ,ဒါကြောင့်သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုပြန်လာ၏အကြောင်းရင်းများရှိပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်လက်ရှိဖွင့်ထားသောဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းသည်သင့်အားအမာခံဂိမ်းကစားခြင်း၊ဂိမ်းကြော်ငြာခြင်း၊ငွေပေးခြင်းသို့မဟုတ်အချိန်ချခြင်းစသည်တို့ဖြင့်အချိန်ရာပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ အပြင်,သင်အမြဲသင်အလုံခြုံဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုပူဇော်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာများကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။, သင်သည်တစုံတခုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်မလိုပါကတည်းကသင်ဒေတာမမေးကြဘူးကတည်းက,သင်လုံခြုံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဖျတ်လတ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။